Jaamacadda Carabta oo ka qeyb qaadaneeyso dib u dhiska dalka – Radio Muqdisho
Jaamacadda Carabta ayaa ballan qaadday iney ka qeyb qaadaneyso dib u dhiska Soomaaliya.
Wafdigii ka socday jaamacadda carabta oo shalay soo booqday Muqdisho kulamana qaatay madaxda dalka ayaa ballan qaaday in jaamacadda carabta ay ka qeeyb qaadaneyso dib u dhiska dalkeena Soomaaliya.
R/wasaare ku xigeenka dalka Kuwait Sheekh Sabaax Xaamud Al Sabaax oo wafdigaasi hoggaaminayay ayaa sheegay in jaamacadda carabtu ay kaalin wax ku ool ah ka qaadaneyso dib u dhiska iyo horumarinta Soomaaliya.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna dhinaciisa xaqiijiyay in Jaamcadda Carabtu ay markan u diyaarsantahay ka qeyb qaadashada mashaariicda horumarineed.
“Wafdigi ugu balaarnaa ee jaamacada carabta ayaa na soo booqday, waa beyj cusub oo u furmay Soomaaliya iyo jaamacadda carabta, waxeey noo keeneen taageero buuxda oo ah in Soomaaliya laga teegeero dhinaca dib u dhiska, soo kabashada dhaqaalaha “ ayuu yiri madaxweyyne Xasan Sheeekh Maxamuud.
Kulanki shalay ay ay muqdisho ku yeesheen madaxda Jaamacadda carabta iyo mas’uuliyiinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxaa goob joog ka ahaa danjirayaasha wadamada carabta u fadhiya magaalada Muqdisho.